Bit By Bit - Hordhac - 1.5 Kormaris kitaabka
Buugan waxaa soo abaabulay agagaarka horumarka ah iyada oo loo marayo afar habab cilmi ballaadhan: logu dhaqanka, waydiinaya su'aalo, ordaya tijaabo, oo abuuraya iskaashi mass. Kuwani afar waji ka wada isticmaalo qaab ka mid ah 50 sano ka hor, oo waxaan ku kalsoonahay in ay dhan waxaa loo isticmaali doonaa in qaar ka mid ah 50 sano qaab hadda ka ahay. Waxaan u go'ay mid ka mid ah cutubka in hab kasta. Qaar badan oo ka mid ah cutubyada ku leeyihiin qaybta loo soocay in ay faallo dheeraad ah, lifaaqa farsamo ama taariikhiga ah, iyo hawlo loo isticmaali karo fasalka ama is-waxbarasho. Sababtoo ah qaababka kuwan, waxaan doonayaa inaan sii text ugu muhiimsan ee sida fudud ee suurtogalka ah; ayaa kuu gudbin kara kuwan qaybaha kale ee cutubyada haddii aad jeclaan lahayd faahfaahin dheeraad ah iyo xigashooyinka galay suugaanta.
In cutubka 2 (habdhaqanka loo kuurgalo), waxaan ku tilmaami doonaa waxa iyo sida cilmi baran karaan ka logu dhaqanka dadka. Gaar ahaan, waxaan diiradda doonaa xogta raad digital iyo macluumaadka maamulka halkaas oo ah cilmibaadhe ku lahaa kaalin ku lahayn abuurka xogta. Waxa aan ku qeexi doonaa qaababka caadiga ah ee noocan oo kale ah xogta, oo waxaan sharxi doonaa xeelado cilmi qaar ka mid ah in loo isticmaali karaa si guul leh u bartaan dhaqanka ka fiirsanayo.
In cutubka 3 (Waydiinta su'aalaha), waxaan bilaabayaa by muujinaya waxa cilmi baran karaan by dhaqaaqin ka baxsan logu dhaqanka iyo bilaaban la dhaqanka dadka. Gaar ahaan, waxaan ku doodi doonaa in uu jiro qiimaha weyn ee samaynaya cilmi sahan, xataa dunida ka buuxa xogta digital oo hore u jiray. Waxaan dib u eegi doona guud ahaan qaabka baadi sahanka dhaqanka iyo u isticmaalaan si ay abaabulo horumar ah in da'da digital awood cilmi baadhitaan. Gaar ahaan, waxaan ku tusi doonaa sida da'da digital keeni kara in ay isbedel weyn oo ku sampling iyo waraysiga. Ugu dambayntii, waxaan ku tilmaami doonaa laba xeelado isku xogta sahanka la xogta raad digital. Inkasta oo sawir isagoo sheegay in cilmi baadhitaan ay qaar ka mid ah hadda dareemayaa, waxaan filaynaa in da'da digital noqon doontaa da'da dahab ah oo cilmi baadhitaan.
In cutubka 4 (Running tijaabo), waxaan bilaabayaa by muujinaya waxa cilmi baran karaan marka ay ka gudbaan logu dhaqanka iyo waydiinaya su'aalo sahan. Gaar ahaan, waxaan ku tusi doonaa sida aan kala sooca lahayn ay gacanta ku tijaabo-halkaasoo cilmibaadhaha ka jira dunida ee aad u gaar ah oo hab-awood cilmi in ay bartaan oo ku saabsan xidhiidhada sababaha. Waxaan is barbar doonaa noocyada tijaabo ah in aan u qaban karo ee la soo dhaafay la kala cayn ah in aan hadda ka qaban kartaa. Iyadoo jeeda in, waxaan ku tilmaami doonaa ganacsi-offs ku lug labada xeeladaha ugu muhiimsan ee samaynta tijaabo digital. Ugu dambeyntii, waxaan soo gabagabeyn doonaa talo design qaar ka mid ah oo ku saabsan sida aad ka faaiidaysan karaan awoodda dhabta ah ee tijaabo digital oo sharxaan qaar ka mid ah mas'uuliyadda in la iman in xoog.
In cutubka 5 (Abuuridda iskaashiga mass), waxaan ku tusi doonaa sida cilmi-abuuri kartaa iskaashi-sida mass crowdsourcing iyo muwaadin sayniska-si ay u sameeyaan cilmi bulsho. By ku tilmaamay mashaariicda iskaashiga mass guul iyo bixinta ah mabaadi'da abaabulka fure yar, waxaan rajeynayaa in aad ka dhaadhiciyo of laba wax: marka hore, iskaashiga mass in laga faaiidaysto kartaa cilmi bulsho, iyo labaad, in cilmi isticmaala iskaashiga mass karti u leeyihiin xallinta noqon doonaa dhibaatooyinka in markii hore u muuqatay wax aan macquul aheyn. Inkasta oo ay iskaashanayaan mass waxaa inta badan dallacsiiyey hab si loo badbaadiyo lacag, waa ka sii badan intii in. iskaashi Mass kaliya ma noo oggolaan in la sameeyo cilmi-jaban, waxaa noo ogolaadaa in ay cilmi-baarista si fiican u sameyn.
In cutubka 6 (Ethics), waxaan ku doodi doonaa in cilmi ayaa si degdeg ah sii kordhaya awoodda badan ka qaybgalayaasha, iyo in awoodda waxyaalahan waxaa loo beddelo si ka dhaqso badan our caadooyinka, xeerarka, iyo shuruucda. awood isku dhafan-kordhaysa Tan iyo la'aanta heshiis ku saabsan sida in xoog loo isticmaalo waa in ay ahaataa-caleemo cilmi xaalad adag si fiican u la micno ah. Si wax looga qabto dhibaatadan, waxaan ku doodi doonaa in cilmi-waa in ay qaataan a mabaadi'da ku salaysan hab. Taasi waa, cilmi waa in qiimeyn ay cilmi marayo xeerar-oo waxaan qaadi doonaa sida mabaadi'da siiyey-iyo iyada oo guud anshaxa jira. Waxaan soo jeedin doonaa afar mabda 'aasaasay iyo laba qaab anshax oo kaa caawin kara hanuuniyo go'aamada aad. Ugu dambayntii, waxaan ku tilmaami doonaa oo falanqeeyaan qaar ka mid ah caqabadaha gaarka ah anshax aan ka filan waajahaan doonaa cilmi mustaqbalka, iyo waxaan kuu soo bixin doonaa talooyin wax ku ool ah, waayo, ka shaqeeya goob la anshaxa aan saldhigan.
Ugu dambeyntii, ee cutubka 7 (Mustaqbalka), waxaan soo koobo saddex mawduuc in noqnoqon guud ahaan cutubyada iyo in uu noqon doono si gaar ah muhiim in mustaqbalka.
cilmi Bulshada ee da'da digital dari doona waxa aynu samaynay ee la soo dhaafay la awoodaha aad u kala duwan ee mustaqbalka. Sidaas darteed, cilmi bulsheed la qaabeeya doonaa labada saynisyahano bulshada iyo xogta saynisyahano. koox kasta wuxuu leeyahay wax inay ka qayb qaataan, waxaana uu koox kasta ay leedahay wax ay wax ku bartaan.